मन्त्रीकै लागि माओवादी भित्र खैलाबैला, तनावमा प्रचण्ड – Setosurya
काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भइरहेको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी छन् । मन्त्रालयको भागबन्डा जुटेमा आजै दुवै दलबाट मन्त्री नियुक्त भई सपथ लिने सम्भावना छ ।
प्रचण्डले पार्टीका भन्दा पनि पहिले माओवादी फुटाएर अन्यत्र गई फर्केकालाई यसपटक मौका दिँदैछन् । माओवादीबाट मन्त्रीमा रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, मातृका यादव, देवेन्द्र पौडेल, देव गुरुङ, हिमाल किराँती बढी चर्चामा छन् । जसमध्ये थापा, भुसाल, यादव र पौडेलले पार्टी फुटाएर हिँडेका थिए । थापा, भुसाल, यादव मोहन वैद्यको पार्टीमा थिए भने पौडेल बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीमा ।
अहिले प्रचण्डका सबैभन्दा विश्वासपात्र थापा, भुसाल, यादव नै भएका छन् । सम्भवतः यी तीनैजनाले आजै मन्त्री पदको सपथ खाने सम्भावना छ । थापाले गृहमन्त्रीको दाबी गरेका छन् । उनी उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बन्नेछन् ।
यसपटक वर्षमान पुनलाई मन्त्रीबाट रोक्न रामबहादुर थापा बादल र पम्फा भुसाल निकै जोडतोडले लागेका छन् । पुनलाई पार्टी एकता विरोधी भनेर एमालेबाट प्रचार गराइएको छ । पुनलाई भारतीय संस्थापन निकट भएको भन्दै माओवादीभित्रको एउटा समूहले मन्त्री बन्न नदिने प्रयास गरेको स्रोतले बतायो ।
प्रचण्डलाई नायिका रेखा थापाको प्रश्न ! के थिए प्रचण्ड, के भए ?
पार्टी एकतापछि प्रचण्ड अध्यक्ष बन्ने निश्चित, एमाले भित्र महासचिव को बन्ने भन्ने विषयमा हानथाप